Vincent Kompany oo ka hadlay xaallada ay haatan ku sugan tahay Man City & sida looga gudbi karo – Gool FM
Dajiye November 12, 2019
(Manchester) 12 Nof 2019. Daafacii hore kooxda kooxda Manchester City ee reer Belgium Vincent Kompany ayaa sheegay in Sky Blues aysan u baahneyn inay la soo saxiixato daafac cusub inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Kooxda Manchester City ayaa waxay xilli ciyaareedkan dhibaato xoogan ka heysataa dhanka daafaca, kaddib markii uu dhaawac muddo dheer ah uu soo gaaray Aymeric Laporte iyo bixitaankii Vincent Kompany oo aan bedel loo helin.
Manchester City ayaa guuldarro 3-0 ah ka soo gaartay kooxda Liverpool kulankii ka dhacay garoonka Anfield ee ka tirsanaa kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League.
Haddaba Vincent Kompany ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” ayaa wuxuu ku sheegay:
“Uma maleynayo inay Manchester City u baahan tahay inay la soo saxiixato daafac cusub”.
“Manchester City marwalba waxay ku dhiban tahay kulamada ay Liverpool kula ciyaarayaan garoonka Anfield”.
“Waxaad la dagaalameysaa mudo 25 sano ah oo aadan wax guul ah ku gaarin garoonka Anfield, tani way adag tahay, waa labo kulan oo hal ciyaar ah, waxaad la ciyaareysaa koox aad u fiican, waxaadna isku dayaysaa inaad taariikhda garaacdo”.
“Sida ugu fiican ee lagu horumain karo waxqabadka daafaca Manchester City ayaa waxay tahay in kooxda ay weerar u qaado sidii hore oo kale”.